Eprel 2020 | RayHaber | raillynews
Ọnwa ole: April 2020
KON Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nwaputara oge nwa oge. Na nkwupụta ahụ e mere nkwupụta mgbasa ozi nke ọha (PDP), a gụnyere ozi ndị a: “Iji belata nsonaazụ Covid-19, nke na-emetụta ụwa dum. [More ...]
N’ikwekọ na mkpebi nke Ankara Governorate Provincial Hygiene Board, akara ụbọchị 19 na ọnụ ọgụgụ 01/03, na ụbọchị nke 2020-29.04.2020 Mee 2020, ebe a ga-emejupụta mgbochi n’ogo nke usoro a ga-ewe megide ọrịa coronavirus (Covid-27). [More ...]
Ọrụ Feverish na ọdụ ụgbọ ala Ọhụrụ nke Ordu
Obodo ukwu dị na Ordu Karşıyaka Ndị agbata obi nọ n'okporo ụzọ dị na 2,5 km mara dị ka ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ na Eskipazar TOKİ n'okporo ụzọ Çiftlik Caddesi. Iji ọrụ mee ya Karşıyaka Agbata Obodo N’agbata Obodo [More ...]
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) site 2019 site na April oge, 356 mmadụ oke TEO ọha na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mbanye usoro malitere. Ihe ruru otu puku ndị ihe metụtara tara maka nsonaazụ na-akọwaghị maka otu afọ [More ...]
Obodo Antalya Metropolitan ezubela ịnye ụgbọ njem ọha maka ndị ọrụ ahụike, ndị ọrụ ọha na ndị ọrụ ndị ọzọ, bụ ndị nwere ụgwọ ịrụ ọrụ n'ime oge ụbọchị anọ gafere, nke ga-amalite n'abalị nke Eprel 30. 3 ikp [More ...]
Okporo ụzọ emechiri emechi ọmụmụ Antalya nke atọ
N'ime usoro Antalya Metropolitan Municipality 3rd Raage Sistemụ Rail System, Dumlupınar Boulevard na Adnan Selekler Caddesi interringction junction (Coast Guard Junction) ga-anọ n'okporo ụzọ maka ụbọchị iri na ise malite na 01 Mee 2020. [More ...]
Halkalı Kapıkule Railway Construction Revolts Farmen si Edirne!
Republic of Turkey Ministry of Transportation na Infrastructure ekenịmde ke European Union na mmekorita ya na Istanbul Halkalı- Oru ngo nke Edirne Kapıkule Railway Line dọtara mmeghachi omume n'ihi mmụba nke uzuzu na mpaghara ọrụ ugbo. Mgbakwunye na mpaghara Havsa nke Edirne [More ...]
Nkwado na ASELSAN maka ilrịba Ama na fromgbọ okporo ígwè si Mahadum Istanbul Commerce
na Istanbul Commerce University na ASELSAN iji belata na nduzi na esenidụt ụgbọ okporo ígwè oru na Turkey, anụ ụlọ R & D-eme na-egosi na ihe ngwọta maka ogbugbu nke a imekọ ihe ọnụ protocol e banyere. N'ime usoro nke usoro, isi ọdụ ụgbọ oloko bụ isi [More ...]
Ngalaba ulo oru nchekwa na nke ugbo elu nwetara oke ya site na mmebi nke nje Corona, nke gbasaa site na uwa niile wee malite na China. Mmepụta, ọkọnọ, friji na nkwekọrịta n'ihi nje nke gburu ọtụtụ puku mmadụ [More ...]
Ministri togbọ njem kwuru ịkwụsị ịkwụsị tiketi na-efu ego
Minista na-ahụ maka njem na akụrụngwa Adil Karaismailoglu kwuru na nkwupụta na ụlọ ọrụ ahụ belatara ọnụ ọgụgụ ndị njem na njem ndị njem n'okporo ụzọ n'ime oke nke usoro ndị e mere megide ụdị ntiwapụ nke ụdị Coronavirus ọhụrụ (Kovid-19). Ijikọ njem na ezumike [More ...]
Akwukwo Akwukwo Nke abuo
Akwukwo ezumike nke abuo bu ihe eji emegharia ihe omumu obula na ihe omumu nke umu akwukwo nke ulo akwukwo nke abuo gbara n’aho akwukwo ma mee ka ihe omuma di na ya. Dị ka o si eme, ezumike ezumike ọkọchị nke abụọ [More ...]
Nkwado ụgbọ njem maka ndị ọrụ ahụike na-aga n'ihu na Konya
Obodo Konya na-enye ụgbọ ala nke ndị ọrụ ahụike na Konya site na bọs kemgbe ụbọchị mbubata ngwa ngwa. N'ime mgbochi ụbọchị 3, obodo ukwu ga-anọkwa n'ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ. [More ...]
Dika akụkụ nke usoro ewepụtara oria ojoo nke Covid-19, a ga-etinye usoro iwu iwu n'obodo 1 na Zonguldak na Mee 2-3-30. Ọ bụ ezie na ndị bi na Istanbul nọrọ n'ụlọ ha ruo ụbọchị atọ, ọtụtụ ngalaba na ndị mmekọ nke İBB nwere ike [More ...]
Karşıyaka na Bostanlstan Ferry Docks
Obodo Izmir mepere emepe mgbe obodo mepere emepe iji mee ka ụmụ amaala nweta nnabata ahụike n'efu Karşıyaka a na-ejikwa ọdụ ụgbọ mmiri Bostanlı. Ngwa Maskematic KarşıyakaNdị bi ebe ahụ nwere obi ụtọ. Obodo Izmir [More ...]
Anyị NATO mmekorita na United States n'elu-arịọ arịrịọ, na-akwado agha megide ndị United States of America ibugara ha ọgwụ na Turkey Coronavirus. Turkey Covidien-19 nyeere a ngụkọta nke 55 na mba n'oge oria ojoo na ụwa 3rd kasị akwalite ọdịmma ndị mmadụ [More ...]
A kpọtara 1500 Live Queen Bees na Ọnụ omszọ omsgbọ Ahịa Sarp
E jidere gwongworo 1500, kilogram afọ na ihe dị iche iche n'ụgbọala nke a na-enyo enyo na arụmọrụ nke plọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọgwụ. Gbaara banye na Turkey [More ...]
Nkwado Ekwentị maka ndị amaala n'ihi COVID-19
Ministri nke ezinulo, ndi oru na ndi oru ndi mmadu n’enye ndi mmadu ihe nlere anya karia iri isii na ise, ndi nwere nkwarụ, ndi anwuru n’agha na ndi agha, na ndi no n’abia, ndi n’acho na ndi n’acho. phones, [More ...]
Dabere na kalenda 'normalization' nke a na-ekwu na nzukọ ndị isi oche nke Onye isi ala Erdoğan; Mgbe ememme ahụ gasịrị, "otu narị na-ahazi otu ụzọ n'ụzọ ziri ezi" agaghị eme, mana nwayọ ga-eburu mmachi ahụ wee meghee ebe emechiri emechi. Turkey, mbụ hụrụ na March 11 [More ...]
Coronavirus jidere na akụrụngwa siri ike na-akpata mmetọ ikuku
Nchoputa ndi sayensi na oria ojoo nke coronavirus, nke na emetuta uwa dum, n’eme ka anyi mata oria a ma mee ihe. Mahadum Harvard kpughere na ikuku ikuku kpatara ọgbụgba coronavirus, Mahadum Bologna [More ...]